Ihe kacha mma Spanish mobiles | Gam akporosis
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Spain na, mgbe anyị na-atụle nhọrọ nke imegharị ekwentị ochie anyị maka nke ọhụrụ, ụdị ndị si mba ọzọ dịka Huawei, Samsung, Apple, Lenovo, Motorola, Xiaomi, LG na ogologo ogologo wdg. . Nke a, na akụkụ ya, bụ ihe ezi uche dị na ya, ọ bụkwa ya ike ahia ahia pere mpe. Brandsdị ndị a abụghị naanị na-akpọ oke ahịa na mgbasa ozi na mgbasa ozi kamakwa ị na-enweta nlebara anya dị ukwuu site na mgbasa ozi, ma ndị ọkachamara na ndị isi. Na ihe niile a na-agụtaghị "ụyọkọ ndị Fans" ndị na-ede ụbọchị ọ bụla na blọọgụ, weebụsaịtị na netwọkụ mmekọrịta, wee si otú ahụ na-enye onyinye karịa ịkọwapụta ụdị ndị a.
Ma eziokwu bụ na Spain anyị nwekwara ndị isi ama ama, na mba, anaghi m ekwu maka acorn. Ọ bụ eziokwu na ha enweghị ike mgbasa ozi nke ọtụtụ ụdị ndị anyị kwuburu na mbụ, ọ bụkwa eziokwu na ha anaghị akpalite mmasị ndị mgbasa ozi dị ka ndị a, agbanyeghị, ha enweghị ihe ọ bụla ga-emere anyaụfụ. Ha na-enye ezigbo mma mobiles Spanish, na ọnụ ahịa dị mma yana, nke kachasị mkpa, ha na-eme ndị ọrụ ha obi ụtọ. Maka ihe a niile, taa, na Androidsis anyị na-ewetara gị nhọrọ ụfọdụ n'ime ndị kasị mma spanish mobiles nke oge.
1 Ekwentị ike Pro 3
4 Obodo MyWigo 3
5 Spanish mobiles?
Anyị na-amalite nhọpụta anyị kachasị mma Spanish mobiles na otu n'ime ụdị ọkacha mmasị m, ọ bụghị naanị na smartphones, kamakwa n'ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche gụnyere ekweisi, ndị na-agụ e-akwụkwọ, ndị ọkà okwu, mbadamba na ndị ọzọ. M na-ezo aka Energy System, na ndị ọzọ kpọmkwem, nke nwere ike kọwara dị ka ya flagship, na Ekwentị ike Pro 3, smartphone - phablet nke na-enye a 5,5 anụ ọhịa IPS Full HD ihuenyo (1920 x 1080 pikselụ) na Dragontrail nchedo na mgbochi mkpisiaka mkpuchi. Ejiri ígwè, ụlọ Energy Energy Pro 3 ụlọ n'ime a Asatọ-isi ARM Cortex A53 processors na 1.5 GHz yana a Mali T860 GPU, Nchekwa 3 GB Ram y 32 GB nke nchekwa Esịtidem expandable site na microSD-HC / XC kaadị ruo ihe ọzọ 256 GB.
Na video na foto ngalaba, ọ pụtara ìhè maka ya nhazi igwefoto abuo nwere oghere 13 MP nwere oghere nchọpụta autofocus (PDAF) na oghere 5 MP ọzọ nwere autofocus, ụda ụda abụọ, nyochaghachi, ọnọdụ eserese. Na n'ihu, a 5 MP n'ihu igwefoto.
Uzo ozo di iche-iche n’eme ya bu na o biara Android 7.0 Nougat dị ka sistemụ nrụọrụ ma nwee a Batrị 3.000 mAh nwere sistemụ ngwa ngwa (na 1 awa ị nwere ike iru ruo 65% ụgwọ), 3.5mm jack headphone, nkwado SIM abụọ, Bluetooth 4.1, onye na-agụ akara mkpịsị aka, na ọtụtụ ihe mmetụta, ọrụ na atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime igwe Spanish kachasị mma n'oge a.
Ugbu a, anyị na-awụlikwa elu ọzọ nke ndị kasị ewu ewu na ihe ịga nke ọma Spanish mobile emepụta, ma kpọmkwem anyị na-ezo aka ya n'elu nso, na BQ Aquaris X Pro, Smartphone a na-arụ ọrụ dị elu «Ezubere na Spain», dịka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-ekwupụta na mgbasa ozi ya.
The BQ Aquaris X Pro awade na a mara mma ma na-akpachara anya a haziri a 5,2 nke anụ ọhịa ahụ IPS Full HD ihuenyo 2.5D na 1080 x 1920 mkpebi, mgbochi mkpisiaka ọgwụgwọ na Quantum Agba + teknụzụ nke na-enye anyị ohere iji anya nke uche hụ ihe doro anya na agba dị iche iche.
N'ime ya ụlọ a Snapdragon 626 processor Qualcomm na asatọ cores na a elekere ọsọ nke 2,2 GHz na-abịa na-esonyere ndị Adreno 506 GPU GPU, 3 ma ọ bụ 4 GB nke Ram (dabere na nsụgharị ahọrọ), na 32GB, 64GB, ma ọ bụ 128GB nke nchekwa dị n'ime nke anyị nwere ike ịgbasa na kaadi microSD ruo 256 GB.
Dị ka sistemụ arụmọrụ, BQ Aquaris X Pro na-abịa Android 7.1.1 Nougat na mgbakwunye na njikọta Bluetooth 4.2, NFC, igwe okwu abuo, onye na-agụ akara mkpisi aka, GPS, 4G, Dual SIM, Typedị USB-C na ọtụtụ ndị ọzọ. Mana obi abụọ adịghị ya, isi okwu ya dị na ngalaba vidiyo na foto.
La igwefoto isi Ọ nwere Samsung S5K2L7SX 12 MP Dual Pixel sensor nwere oghere ƒ / 1.8, yana pikselụ 1.4 µm nwere ike ijide 33% karịa ọkụ, nke mere ya ezigbo maka ndị hụrụ foto abalị ma ọ bụ na ọnọdụ ọkụ dị ala. Ọ na-enyekwa Flash ụda abụọ, nchọpụta autofocus oge, ihe ntanetị vidiyo, njikwa akwụkwọ ntuziaka (oge ikpughe, elekwasị anya na ISO), agbapụ na usoro RAW na ọtụtụ ndị ọzọ.
La n'ihu igwefoto jikọtara ihe mmetụta 5 MP Samsung S4K8H8YX na oghere ƒ / 2.0, 1.12 µm / pixel
n'ihu flash na akpaka mma mode.
N'ime ihe ndị a niile, na enweghị obi abụọ, anyị bụ, ma ọ dịkarịa ala, tupu otu n'ime mobiles Spanish kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa.
Akwụnye m olu m na mbinye aka Weimei dị ka mmadụ ole na ole n'ime gị na-agụ. O yikarịrị, ọ bụrụ na ị nụla, ị chere na ọ bụ akara ndị China n'ihi aha ya, agbanyeghị eziokwu ọ bụla. Weimei bụ mmalite nke Madrid, ikekwe nke kachasị ọhụrụ n'ime ụdị ndị na-ahụ maka ekwentị na Spanish, mana ebumnuche ya bụ ịnye ọnụahịa kachasị mma na ọnụahịa kacha ala. Ma otu a ka o siri dị Weimei WePlus 2, ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ ya ugbu a kọwara dị ka "nzọụkwụ ọzọ na-aga n'ihu n'ime smartphones anyị."
Ihe ọhụrụ Weimei WePlus 2 na-egosipụta a 5,5 anụ ọhịa IPS Full HD ihuenyo 1920 x 1024 pikselụ na weOS sistemụ arụmọrụ dabere na Android 6.0 Marsmallow nke a kwadoro site na a Octa-isi ARM Cortex A53 nhazi 1,8 GHz yana 4 GB Ram na 64 GB nke nchekwa Esịtidem ị nwere ike ịgbasa iji kaadi micro SD ruo 128GB.
Na ngalaba vidiyo na foto, Weimei WePlus 2 nwere a igwefoto isi nke 13 MP na ọnọdụ abalị, ọnọdụ mma na wdg 14 foto ụdịdị, na a 8 MP n'ihu igwefoto na nchọpụta ihu.
Emechara ihe a niile na 3130 mAh batrị ya na USB Type-C njikọ na “Smart Battery Optimizer” na “Oke Ọnọdụ” ọrụ, gbakwunyere Bluetooth Bluetooth, SIM abụọ, 3.5mm jack njikọ maka ekweisi, GPS na ndị ọzọ.
Obodo MyWigo 3
Egwuregwu ọzọ na-adọrọ mmasị bụ nke ụlọ ọrụ ahụ MyWigo, nke sitere na mba dị iche iche nke dabeere na Valencia nke Cirkuit Planet, nke, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị ada ka anyị, eziokwu bụ na ha nwere ọnụnọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị mba. Otu n'ime smartphones ya kachasị mma bụ nke a Obodo MyWigo 3, na ọnụ na 5,5 anụ ọhịa IPS HD ihuenyo na sistemụ arụmọrụ Gam akporo 6 Marsmallow Kwadoro site na 6737GHZ quad-isi MediaTek MT1,33 processor tinyere 3 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwama ọ bụ n'ime gbasaa ruo 64 GB site na kaadi microSD, onye na-emesapụ aka 3650 mAh batrị, akara mkpisiaka, 4G ...
N'ihe banyere igwefoto, ọ na-enye a 13 MP igwefoto isi eji ihe mmetụta Samsung S5K3L8, Dual Led Flash na autofocus autofocus (PDAF), na a 8 MP n'ihu igwefoto jiri flash ka ị were selfies kacha mma.
MyWigo City 3 abụghị ekwentị kachasị mma na ndepụta a, agbanyeghị na ọ na-enye ngwongwo nke ọmarịcha ịdị mma na ọnụahịa pụtara.
Ọtụtụ n'ime unu nwere ike iche na ọtụtụ oge mgbe ị na-agụ post a, ọ bụ ezie na anyị na-ekwu maka "Spanish mobiles", Ihe ndị a abụghị ngwaọrụ arụpụtara otu narị pacenti n'ime ala anyị. Ee ee, I kwuru eziokwu. Ihe dị iche iche nke ekwentị (ibe, igwefoto igwefoto, ihuenyo, igwe okwu, batrị na ndị ọzọ) sitere n'aka ndị nrụpụta nke atọ. Achọpụtara ihe atụ kachasị pụta na ndị nhazi nke Qualcomm, MediaTek, wdg. Otu ihe a na - eme na oghere igwefoto na ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye, usoro mgbakọ ikpeazụ na-arụkarị ụlọ ọrụ ọzọ na mba ofesi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ China ma ọ bụ mba ọwụwa anyanwụ. Ihe a niile bụ "nkịtị", n'echiche na ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ụlọ ọrụ niile, site na nke kachasị dị ka Samsung ma ọ bụ Apple, na ndị ọzọ nwere obi umeala dịka Weimei. Anyị anaghị akwụsị ịsị na Apple bụ onye America, ma ọ bụ na Samsung na LG abụghị ụlọ ọrụ South Korea.
Maka nke a, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-agba mbọ ime ka a mata na ekwentị ha bụ Spanish site na ozi dịka «Ezubere na Spain» nke gunyere mbinye aka BQ. Nke ahụ ọ dịghị ada ụda dị ka ozi ụfọdụ ụlọ ọrụ ọzọ nwere akara mkpụrụ osisi gụnyere na ngwaahịa ha? Ee ee, a na-emekwa ndị ahụ na China, ọ bụ ezie na ọnụahịa ha ji okpukpu ise karịa.
Na nkenke, ndepụta nke ngwaọrụ ndị anyị hụrụ bụ nke Spanish mobiles n'ihi na e mere ha na Spain na n'ihi na ụlọ ọrụ ha dị na Spain, na-agwa ndị Spen ihe ndekọ, n'agbanyeghị ma otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ arụpụtara otu ihe n'otu mba ma ọ bụ mba ọzọ.
Ma ruo ugbu a nhọrọ anyị kachasị mma na Spanish mobiles. Cheta na ndepụta a abụghị ọkwa yana na anyị nwere ike ịhapụ ọdụ na pipeline. Ọ bụrụ otu a, ọ bụrụ na ị nwere ekwentị mkpanaka Spanish nke ọrụ gị na-enye ọ happyụ nke ukwuu ma ịchọrọ ka ụwa mara, gwa anyị na nkwupụta ma nyere anyị aka ịgbasa ndepụta a nke, ka emechara, abụghị ihe ọ bụla karịa ntụnye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe kacha mma Spanish
Nyochaa MAZE Alpha 4G the 6 "na-enweghị okpokolo agba nke ga-eju gị anya maka uru maka ego